Fantaro ireo mpilalao vaovao ao anatin’ny Barea an’i Madagasikara • Madagossip
il y a 2 années 4.1 K
Hanao lalao ara-pirahalahiana amin’ ny ekipam-pirenena Komorianina ny Barea an’i Madagasikara amin’ny sabotsy 11 novambra 2017. Ao amin’ny Stade Municipale Saint-Leu-La-Forêt ao Paris (Frantsa) no hanatanterahana izany lalao izany.
Efa nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy. Mpilalao mila ravinahitra avy ao Eoropa, Afrika ary Asia no nantsoin’ny mpanazatra Nicolas DUPUIS.
Isany nahitana mpiandry tsato-by vaovao ity lisitra ity dia i ADRIEN Melvin izany. Teraka tao La Reunion izy saingy Malagasy kosa ny raibeny. 24 taona i Melvin amin’izao fotoana izao ary milalao ao amin’ny Amien AC (Klioba divizionina faha 4 ao Frantsa).
Izy no Adrien Melvin
Mpilalao faharoa vaovao kosa i BOYER Fabien. 26 taona izy, izao voaantso voalohany ao anatin’ny ekipam-pirenena izao. Malagasy ny reniny ka izay no antony ahafahany milalao ao anatin’ny Barea an’i Madagasikara. Milalao ao amin’ny US Créteil (Klioba divizionina faha 3 ao Frantsa) izy ary vodilaharana afovoany no toerana misy azy eny ambony kianja.
Izy no Boyer Fabien
Ny mpilalao vaovao farany kosa dia i MOMBRIS Jerôme. Andrasana tokoa ity mpilalao ity satria efa nisy ny fotoana izay tokony nilalaovany teo anivon’ny Barea saingy tsy tonga izy nohon’ny antony manokana. Milalao ao amin’ny GFC Ajaccio (Klioba divizionina faha 2 ao Frantsa) i Jerôme ary mitazona ny toeran’ny vodilaharana sisiny havia. Tsara ny manamarika fa 29 taona izy, izao voantso voalohany ao anatin’ny ekipam-pirenena Malagasy izao.
Izy no Mombris Jerôme
Mpilalao kalaza ao amin’ny Barea
Ankoatra ireo mpilalao ireo, anisany ho avy amin’ity lalao ity ihany koa ireo kalazan’ny baolina kitra Malagasy eran-tany. Toa an’i ABEL Anicet izay milalao ao amin’ny Ludogorets ( Divizionina 1 Bulgarie) sy RAHERINAIVO Rinjala izay milalao ao amin’ny FC Sion ( Divizionina 1 Suisse), eo ihany koa i AHMADA Ibrahim, milalao ao amin’ny Moulouida Club Alger (Divizionina 1 Alzeria). Andrasana fatratra tokoa ny filalaon’izy telo lahy ireto.
Barea vaovao. Alefa Barea!
Arak’izany, tsy manambany ity lalao ity mihitsy ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasy ny baolina kitra satria “Derby eto anivon’ny ranomasimbe indianina” ity lalao izay ho tanterahana ity.
Tagsabel anicet adrien melvin ahmada ibrahim barea boyer fabien derby football mombris jerome nicolas dupuis